I-Streamliner Productions iba yinto yokuqala efihla i-xR Partner eNew Zealand | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » I-Streamliner Productions iba yinto yokuqala efihla i-xR Partner eNew Zealand
I-Streamliner Productions iba yinto yokuqala efihla i-xR Partner eNew Zealand
zifihla yamukela i-Streamliner Productions eNew Zealand kunethiwekhi yayo yabalingani bomhlaba wonke. I-Streamliner manje seyi- fihla i-xR Creative & Rental Partner, futhi izonika amandla amazinga amasha wobuciko bemikhiqizo ebonakalayo ezweni elichazwe njenge-mecca echumayo yomkhakha wamafilimu womhlaba wonke.
Inethiwekhi yabalingani bokufihla iqukethe abalingani abangaphezu kwama-200 abasebenza ngokufihla ukuhamba komsebenzi ne-hardware, okuvumela abathengi bokugcina ukuthi bakwazi ukuthola okokusebenza okuhle kakhulu nethalente lobuchwepheshe nobuciko lokusiza ukuletha okuhlangenwe nakho okubukhoma nokwenzekayo empilweni.
USreamliner usanda kutshala imali ekuzuzeni umklomelo wokuzuza umklomelo i-vx4 kanye nepulatifomu esanda kukhishwa ye-rx yokubamba izinjini ezivela eceleni - ingxenye ebalulekile yesixazululo se-xR, esenzelwe ikusasa lomkhiqizo obonakalayo. Indlu yokukhiqiza yezobuchwepheshe ibuye yaqeqeshwa ngochwepheshe ekusetshenzisweni kokufihla ukusebenza nobuchwepheshe be-xR ukuthola isikhundla sobambiswano kanye nokugunyazwa, futhi kwaba ukuphela komlingani osemthethweni ezweni ukuletha ukukhiqizwa okuphelele kokuphela kwe-xR.
I-Streamliner igcina ifa lokuhlinzeka amaklayenti ngobuchwepheshe obusezingeni eliphakeme kakhulu futhi obubanzi kakhulu kwezobuchwepheshe bokuzijabulisa, kuhambisana neqembu lochwepheshe abasha kanye nochwepheshe bezobuchwepheshe ukuletha imicimbi ebukhoma nemikhiqizo yamafilimu kulo lonke elaseNew Zealand.
"Abasebenzi bethu bahlanganisa isipiliyoni somcimbi obukhoma amashumi eminyaka ngolwazi olujulile lwezinhlelo zevidiyo ezisezingeni eliphakeme futhi sinekhono ekusebenzeni kumaphrofayili aphezulu, amaphrojekthi abaluleke kakhulu". kusho uRichard Manu, Umnikazi we-Streamliner kanye no-GM. “Siqhubeka nokutshala imali kwi-hardware yakamuva, isoftware nezinhlelo ezinikeza amaklayenti ethu ukufinyelela kubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu kakhulu. Ukwethula imikhiqizo eminingana efihlekile ekuhambeni komsebenzi wethu kuhlanganise lezo zinhlelo futhi manje kuhlanganiswe nepayipi le-xR, akukho lutho olungafinyeleleka ”.
Selokhu kwafakwa imali kuhlelo lokufihla imvelo, umsebenzi wakamuva uphinde wabona ukubambisana okusemthethweni phakathi kwabadlali ababalulekile embonini yefilimu nezokusakaza ye-NZ. Ihlanganisa ndawonye ubuchwepheshe besiteji esibukhoma nolwazi lobuchwepheshe be-xR bamuva obufihliwe obuvela kwa-Streamliner, izindawo zokuqopha izithombe ezivela kwesinye sezitudiyo ezinodumo ezweni, i-Avalon Studios nokwenziwa kokuqukethwe kwesikhathi sangempela kanye ne-VFX evela ku-powerhouse edume umhlaba wonke, iWeta Digital.
"Ukusetha kufaka amapaneli e-LED amakhulu, alungiseka kalula akwazi ukubonisa ividiyo ngaphesheya kwe-8K njengendlela yokwengeza amasethi asebenzayo futhi imvamisa ukufaka izikrini eziluhlaza ezilungiselelwe izizinda nezangaphandle" Kusho uDavid Conley, uMkhiqizi oPhethe weWeta Digital. Lobu buchwepheshe obunqenqemeni, buhlanganiswe nezinzuzo zezempilo nezokuphepha zokusebenza eNew Zealand, okulawule ngempumelelo lolu bhubhane, kuthenjwa ukuthi kuzosiza ukuheha imikhiqizo yabo bonke osayizi baleli phakethe elilungele ukusetshenziswa.
Iphrojekthi ephawulekayo ekwakhiweni okuvela kwa-Streamliner ne-Weta Digital yimikhombandlela ka- “Avatar” kaJames Cameron, lapho kusetshenziswa khona ukugeleza kokusebenza okufihlekile kwakamuva njengamanje.
“Ukusungula lobu budlelwano ne-Streamliner kuyisikhathi sokuguquka eSouthern Hemisphere, futhi ikakhulukazi ngaphakathi kweNew Zealand nemboni yabo esezingeni lomhlaba yamafilimu. Ngokusebenzisana nethimba eStlinliner, singaxhasa ngokuzethemba amaphrojekthi nemikhiqizo esifundeni esibheke ukusebenzisa ubuchwepheshe be-xR ukufihla imingcele yokudala, ”kusho uTom Rockhill, i-CSO efihlekile.
Ukuthola okuningi nge-Streamliner Productions New Zealand: www.kusani, .com
Ipulatifomu yobuchwepheshe bokufihla inika amandla ubuchwepheshe bokudala nobuchwepheshe ukucabanga, ukudala nokuletha okuhlangenwe nakho okubukwayo okubukhoma okubukhoma ezingeni eliphakeme kakhulu.
Ukuhlanganisa isoftware esekwe ku-3D yesikhathi sangempela ngokusebenza okuphezulu ne-Hardware Hardware, ukufihla kunika amandla ukulethwa kwamaphrojekthi wokudala ayinselele ngezinga nangokuzethemba. Ukuhamba komsebenzi walo omusha owine umklomelo we-Extended Reality (xR) kunika amandla imikhiqizo ehamba phambili emhlabeni, abaculi nezindlu zokukhiqiza ukuletha ekuphileni okuhlangenwe nakho okucwilisayo okukhuthaza nokubandakanya izethameli ezikude yonke indawo.
ukufihla i-xR sekuvele kunamandla okuphehla isikhathi sangempela sabaculi bomculo abanjengoKaty Perry kanye neBlack Eyed Peas ,, amabhizinisi amabhizinisi afana ne-SAP, izikhungo zemfundo ezifana ne-University of Michigan, asakaza imibukiso ye-TV efana ne-MTV Video Music Awards ne-America's Got Talent, imikhiqizo yezentengiso efana ne-Asahi ne-Under Armor nokunye okuningi okubonakalayo emazweni angaphezu kwama-20.
Ngenethiwekhi yenethiwekhi yomhlaba wonke ekhulayo futhi esebenza nabaklami bokubukwa abanamakhono kakhulu emhlabeni kanye namaqembu ezobuchwepheshe emicimbini ebukhoma, ukusakazwa kwe-TV, amafilimu, ukuvakashelwa kwekhonsathi, inkundla yemidlalo, ukufakwa okungaguquki kanye nemicimbi yezinkampani nezokuzijabulisa, ukufihla kwakha isizukulwane esilandelayo samathuluzi wokusebenzisana ukusiza abaculi nabachwepheshe bezobuchwepheshe ukuthi babone umbono wabo.
Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela uvakashele www.disguise.one
zifihla ukunwetshwa Streamliner Productions Ukukhiqiza Okubonakalayo xR 2020-11-19
Ngaphambilini: IBlackmagic Design Imemezela amamodeli amasha we-Micro Micro 3G XNUMXG
Olandelayo: Iselula TV Group Ingeza NGOKWENZA I-Telestrators Yokukhiqizwa Kwezemidlalo Okubukhoma